चम्किलो अनुहारका लागि सूत्र
कल्पना शाक्य ब्युटिसियन —सधैँ बिहान र बेलुका अनुहार सफा गर्दा क्लिन्जिङ मिल्क या काँचो दूध प्रयोग गर्नुहोस् । मेकअप गर्नुअघि र मेकअप हटाउँदा क्लिन्जिङ गर्नु आवश्यक हुन्छ । —२५ वर्षभन्दा माथि लागेपछि छालामा विभिन्न समस्या निस्किन थाल्छन् । छाला फुस्रो हुने समस्या पनि बढ्न थाल्छ । त्यसैले यो उमेरपछि छाला तथा सौन्दर्य विशेषज्ञसँग आ..
यदि तपाईं सुट लगाइरहनुभएको छ भने यी ११ गल्ती गर्दै नगर्नुहोस्
तपाईंले सर्ट लगाउने नियम बारे त पढ्नुभएको होला तर के तपाईं सुट लगाउने नियमबारे ज..
यी हुन् मृगौला पत्थरीका बिरामीले खान नहुने कुरा
डा. कुशल कार्की अपरेसन गरेपछि होस् या ओपीडीबाट फर्केपछि बिरामीले डाक्टरलाई के खा..
के गर्भावस्थामा ‘ग्रिन–टी’ पिउनु राम्रो हो ?
आजकाल ‘ग्रिन–टी’ पिउनु एक फेसन जस्तो बनेको छ । हुन त ग्रिन टीको साधारण चियाभन्दा..
कागती खाँदाका ८ फाइदा यस्ता छन्
कागती स्वादिष्ट खानाका लागि धेरैले खान्छन् तर थोरैले मात्र स्वास्थ्यका लागि खाने..
छोड्नुहोस् यी १० खाना, नत्र हुनुहुनेछ ‘काली’
अमेरिकी एकेडेमी अफ डर्मेटोलोजीको अनुसन्धान अनुसार अस्वस्थकर खानाले छालाको तन्तुलाई नोक्सानी पुर्याएर कालो बनाउन सक्छ जसका कारण तपाईं काली देखिने सम्भावना रहन्छ । त्यसकारण डाइट एक्सपर्टले तपाईंलाई यस्ता खानेकुराबाट बच्ने सल्लाह दिन्छन् । आज त्यही १० खानेकुराबारे चर्चा हुँदैछ । सेतो पाउरोटीः यसले इन्सुलिनको स्तरमा वृद्धि हुन्छ जसक..
कहिले प्रयोग नगर्नुहोस् अरुको इयरफोन, नभए…
हामीमध्ये धेरैले मोबाइलबाट गीत सुन्दा वा कोहीसँग कुरा गर्दा इयरफोनको प्रयोग गर्ने गर्दछौं । आफूसँग भएको बेला आफ्नै इयरफोन प्रयोग गर्ने हामी आफूसँग यो नहुँदा अरुको सापटी लिने गर्दछौं तर यस्तो बानी छ भने सावधान हुनुहोस् । एक नयाँ अनुसन्धान अनुसार आफ्नो इयर प्लग वा इयरफोन अरु व्यक्तिसँग बाँड्दा स्वास्थ्यसम्बन्धि विभिन्न समस्या निम्..
नुहाउँदा नगर्नुहोस् यस्ता गल्ती
धेरै फुस्रो र धेरै चिल्लो दुवै प्रकारका छालाले झन्झट निम्त्याउँछ । फुस्रो छालामा सबैभन्दा बढी समस्या नुहाउँदा निम्तिन्छ । यस्तो छालामा प्राकृतिक तेलको मात्रा निकै कम हुने भएकाले नुहाउँदा झनै नष्ट हुने र फुस्रोपन बढ्ने हुन्छ । अखिर नुहाउने क्रममा फुस्रो छालामा हुन सक्ने गल्ती के होलान् ? कसरी सुरक्षा गर्ने ? ब्युटिसियन एलिसा लेप्..
नबिग्रियोस् र स्वस्थ रहोस् भन्नका लागि फ्रिजमा सामान राख्ने गरिन्छ । तर, फ्रिजमा राख्दैमा सबै सामान बिग्रिँदैन र स्वस्थ रहन्छ भन्ने होइन । कतिपय कुरामा ध्यान दिन सकिएन भने फ्रिजमा सामान राख्दा झनै बिग्रिन सक्छ । खाद्य प्राविधिक मदन चापागाईंले फ्रिजमा सामान राख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराबारे जानकारी दिएका छन्ः १. धेरै बिग्रिने, कम ब..
मुसाले पुर्‍याउने क्षति कसरी नियन्त्रण गर्ने ?
केदार कार्की पशु स्वास्थ्य विज्ञ घरबारी, खेत, गोठ र खोर तथा अन्न भण्डारणस्थलमा मुसाले असाध्य दुःख दिइरहेको हुन्छ । मुसाले गोठ, खोर, घरमा अन्न खाएर, बिगारेर वा प्रदूषित बनाई क्षति पुर्‍याइरहेको हुन्छ । एक सयवटा मुसाको बथानले प्रतिवर्ष एक टन अन्न खाने अनुसन्धानले देखाएको छ । एउटा मुसाले जति अन्न खान्छ, त्यसको १० गुणा बढी [&helli..
यो हो फिटनेस कायम राख्ने डान्स !
शारीरिक फिटनेसका लागि आजकल विशेष गरी सहरका व्यक्तिहरू विभिन्न उपाय अपनाउने गर्छन् । मर्निङवाक, जिम, गेम्सलगायतमा उनीहरूको बिहानी बित्ने गर्छ । डान्स गर्दै फिटनेस कायम राख्न सकिने जुम्बामा अहिले धेरैको आकर्षण बढेको छ । कोलम्बियन डान्सरले सुरुवात गरेको जुम्बा समूहमा बसेर गरिने डान्स तथा कसरत पनि हो । कोरियोग्राफर अर्बट बिटो पर्जले..
भर्‍याङलाई आकर्षित यो हो तरिका
निस्ता गिरी,प्रबन्ध निर्देशक, आरसी इन्टेरियर प्रालि एक तलाभन्दा बढी भएमा घरमा भ¥याङको आवश्यकता पर्छ । घरधनीको इच्छाअनुसार भ¥याङ घरबाहिर तथा भित्र पनि राख्ने गरिन्छ । साधारणतया भर्‍याङ भन्नेबित्तिकै केही वर्षअगाडिका पुराना डिजाइनहरू दिमागमा आइहाल्छन् । तर, अहिले भर्‍याङको पनि डिजाइन तथा बनावटमा धेरै भिन्नता आइसकेको छ । आजकल भर्‍य..
योगी पूर्ण श्रेष्ठ महामृत्युञ्जय योग केन्द्र, गौशाला स्थूल शरीरका सबै प्रकारका प्रणालीको तन्दुरुस्ती कायम राख्नुलाई योगमा स्वस्थ भनिन्छ । त्यसका लागि सर्वाङ्गासन उपयुक्त विधि हो । मस्तिष्क, पिनियल, पिट्युटरी, थाइराइड, पारा थाइराइड र थाइमसजस्ता सबै ग्रन्थीहरूको हर्मोन्स, नम्स सिस्टम तथा सम्पूर्ण शरीर सञ्चालक ज्ञानेन्द्रियसँग आन्त..
सायद, आँखाको ज्योति गुमेकालाई थाहा होला आँखाको महत्व । पाँच सय प्रकारका रंगको छायाँ छुट्याउने क्षमता राख्ने आँखाले एक घन्टामा ३६ हजार बिट्स डाटा लिने चिकित्सकहरू बताउँछन् । आँखामा हुने १० करोड ७० लाख कोषहरूले हरपल आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । तर, यति ठूलो काम गर्ने आँखा शरीरका अन्य अंगभन्दा निकै संवेदनशील हुन्छ । [&he..
प्रा.निना मोदी बच्चाहरू गुलियो अर्थात् चिनीयुक्त खानेकुरामा बढी लोभिन्छन् । सामान्यतया ठूला मान्छेभन्दा बच्चाले निकै नै गुलियो खाइरहेका हुन्छन् । तर, अभिभावक बच्चाले कति चिनी खायो भन्ने खासै मतलब राख्दैनन् । अध्ययनले यसलाई एउटा गम्भीर पक्षका रूपमा व्याख्या गरेको छ । बेलायतको नेसनल डाइट एन्ड न्युट्रिसन सर्भेपछि लन्डनको इम्पेरियल..
डा. सुनीलराजा मानन्धर बालरोग विशेषज्ञ करिब ६० प्रतिशत नवजात शिशुको शरीरमा जन्मिएको २४ घन्टादेखि १४ दिनसम्म पहेँलोपना देखिन्छ । यो आफैँ आउने र १४ दिनसम्ममा आफैँ हराउने हुन्छ । यसलाई नवजात शिशुमा हुने पहेँलोपना भनिन्छ । जन्मँदा प्रायः सबै बच्चाको आँखामा पहेँलोपना देखिएको हुन्छ । तर, आँखाका साथै हत्केला र पैतालामा पनि पहेँलोपना देख..